ISiphepho u-Irma sashintsha umbala weVirgin Islands | Isimo Sezulu Senethiwekhi
ISiphepho u-Irma asibanga nje kuphela umonakalo omkhulu wezinto ezibonakalayo futhi sithathe nemiphefumulo yabantu abangama-58, kepha futhi sonakalise ngokoqobo iziQhingi zaseVirginia kangangokuba umbala omuhle oluhlaza ebesijwayele ukuwubona, usuthathe indawo yaba nsundu.
Umbala onsundu osikhombisa ukuthi lesi siphepho saba yingozi enkulu kangakanani, esase sizovula isigaba esisha esikalini sikaSaffir-Simpson.
Ngomoya omkhulu we-295km / h nengcindezi ubuncane be-914 mbar, ISiphepho u-Irma sishiye inqwaba yemizi ebhujisiwe, izihlahla ezingenakubalwa eziwile, nenani elikhulu labantu abalahlekelwe yikho konke. Njengenjwayelo, kukhona labo abanesikhathi esibi ukwedlula abanye, kungaba ngenxa yokuthi banezinsizakusebenza ezimbalwa zezezimali noma ngoba bahlala endaweni lapho kudlula khona isiphepho esinamandla.
Umonakalo ungabonakala lapho isiphepho sisuka kule ndawo, sibheke e-United States lapho siye sancipha khona kancane kancane, njengoba kufakazelwa inani lamavidiyo alayishwe ku-YouTube nakwamanye amanethiwekhi. Kepha uma lokho bekunganele, i-Operational Land Imager (OLI) yesethelayithi ye-Landsat 8 yeNASA ithathe isithombe esizomangaza ngaphezu kweyodwa: kuso, ubona iVirgin Islands esinsundu, lapho kufanele ibe luhlaza. Kungani? Kunezizathu eziningi.
Enye yazo yilokho uhlaza alukwazanga nje ukumelana nemimoya enamandla yomoya futhi lugcine ludutshulwe yisiphepho uqobo, okungeke kumangaze. Izitshalo zasezindaweni ezishisayo, ngaphandle okumbalwa, azinampande eqinile eyanele ukuthi ihlale ibambeke kahle emhlabathini, ngoba njengoba kwakhiwa izishingishane unyaka nonyaka, azinaso isikhathi sokuthatha izimpande futhi, ngokwesibonelo, isihlahla se-oki (I-Quercus robur) noma uphayini. Ngaphezu kwalokho, usawoti wasolwandle ophethwe yisiphepho maphakathi nezwe ushisa amaqabunga, okwenza izitshalo zigcine ngokufa.
Ngenhlanhla, ngeke isalimaza. Namuhla, wehliselwe phansi esivunguvungwini sendawo eshisayo. Kodwa-ke, kuzothatha amasonto ngisho neminyaka ukwakha kabusha konke okonakele.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » ISiphepho u-Irma sashintsha umbala weVirgin Islands